I-Semalt: 13 Ukunqoba izinhlobo zokuqukethwe ze-Textual for SEO Champions
Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi abasebenzisi bathanda ukufunda okuqukethwe okulula kodwa okufundisayo. Isibonelo, abantu abaningi abasebenzisa okuqukethwe kombhalo, izithombe, izithombe, namavidiyo bathola inombolo enkulu yezivakashi kumasayithi abo.
Kunezindlela ezimbalwa zokuhlukanisa izihloko zakho, futhi uJason Adler, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , ukhulume ngezinhlobo zokuqukethwe ze-textual ezingcono kakhulu zokusebenzisa injini yokusesha - staffe da muro online.
1. Iziqondiso zokugcina
Abantu abaningi bathanda ukufunda iziqondiso, ngakho ungabhala njalo. Ngokuvamile, umhlahlandlela unamazwi angu-2000 kuya ku-3000, futhi uqukethe lonke ulwazi oludingekile abasebenzisi abalufunayo. Uma ubhala iziqondiso zezivakashi zakho, uzobenza bazizwe banelisekile futhi bangagcina amasonto abo acacile ngemuva kwamasonto. Ngenxa yemiphumela yayo yesikhathi eside, umhlahlandlela uhlanganyela kalula futhi uthola inani elikhulu lamazwana.
2. Ukujikeleza kochwepheshe
Abaningi be-webmasters bathanda uchwepheshe wokubhala nxazonke ngoba kulula ukulungiswa futhi akufanele kube isikhathi eside kunamazwi angu-1500. Qinisekisa ukuthi ama-round-up akhomboza lonke ulwazi oludingekayo futhi unezinhlobo eziningi ze-backlink zemvelo. Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi i-round-up expert izothatha isikhathi esiningi ukuze ibhalwe phansi, kodwa uma ihlanganyela, ingakuthola inzuzo eningi ku-AdSense nakwamanye amanethiwekhi afanayo.
3. Okuqukethwe kwansuku zonke
Izihloko ezise-Evergreen yizona zihloko ezihlala zidumile ezinyangeni noma eminyakeni. Ngokuyinhloko, kulula ukubhala izihloko ezijwayelekile, futhi kufanele zihlotshaniswe, ezinye izitayela, izihloko ezishintshayo kanye nezindaba. Bahlala iminyaka efanayo emva kweminyaka futhi abadingi ukuguqulwa uma usenzile nabo.
Kuyathakazelisa ukubhala izinhlu, futhi ziqukethe ulwazi oluningi lwabasebenzisi. Izinhlu zingase zisekelwe eqinisweni futhi zenzeke. Uma izinhlu zakho zifundisa, abafundi bangathanda ukuthanda futhi babelane nabo ngenani elikhulu. Qiniseka ukuthi uhlukanisa uhlu lwakho ngezigaba ezimfushane futhi unikeze abasebenzisi bakho lonke ulwazi oludingekayo.
5. Okuthunyelwe okuvamile kwebhulogi
Okuthunyelwe okubhaliwe kwebhulogi kubhalwe inombolo enkulu yababhulogi. Kusukela manje, kuyindlela enhle yokuheha abantu ekuqondeni indawo yakho, kodwa ukugcizelela kwakho kufanele kube ngekhwalithi kunokuningi. Okuthunyelwe okubalulekile kwebhulogi kuhlale kusendleleni futhi kufanele kubhalwe ngamagama angu-500 kuphela.
6. Amakhasi emithombo
Amakhasi wezinsiza angeke athole isayithi lakho elihle ngokuzumayo, kodwa ahlale eluhlaza futhi angalutholi kalula. Ayaziwa phakathi kwama-SEO nabathengisi futhi angabhalwa inombolo enkulu abantu bahlale befuna imininingwane eyengeziwe kwezinye izihloko ukuze ukwazi ukuzinikeza abanesidingo.
7. Isihloko sendaba
Kuhle ukubhala izihloko abafundi bakho abazithandayo ukufunda nokuhlanganyela. Kunamakhulu kuya ezinkulungwaneni zezihloko okufanele ubhale ngazo. Kufanele ukhethe izihloko zezindaba zakho ngokuhlakanipha futhi kufanele unake izidingo zezivakashi zakho. Uma ungenalo ukufunda, uchungechunge lwama-athikili lungakuthola abafundi abaningi futhi lungakusiza ukukhuthaza umkhiqizo wakho.
8. Okuqukethwe kusakazeka kumakhasi ahlukene
Uma uvula ama-URL afuna ukuthi uvakashele amakhasi alandelayo, yilokhu esikubiza ngo-link-links. Kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokubandakanya abantu abaningi futhi ubasize bahlale kusayithi lakho isikhathi eside. Okuqukethwe kufanele kusakaze emakhasini ahlukahlukene, kodwa akufanele kube nokuqukethwe okungafaneleki njengoba kungonakalisa idumela lesayithi lakho.
9. Okuqukethwe okunolwazi
Kubalulekile ukubhala okuqukethwe okucebile ngolwazi. Awukwazi ukuphikisana nanoma ubani onesikhundla esihle enjini yokusesha. Kungenzeka ukuthi ukukhokha okuningi kokuqukethwe okunjalo. Izihloko ezicebile zolwazi ziqondile futhi kufanele zibhaliswe njalo.
10. Amakhasi okuhambisa isigaba esicebile
Abanye abantu bayakuqaphela ukuthi wonke amazwi kusayithi lakho ayasiza futhi afundisa. Okufanayo kuyasebenza kubanikazi besigaba. Uma isayithi lakho lithola izivakashi, kufanele ubamukele ngezamaqembu ahlukene ukuze bakwazi ukunquma ukuthi yini ongayibheka. Amakhasi wokuhambisa amaqembu ahlinzeka ngama-athikili akho ngolwazi oluningi olufanele futhi akhulise ukubandakanya kwesayithi lakho.
11. Okuthunyelwe kocwaningo
Ngokungangabazeki, izisetshenziswa zokucwaninga zihlale zifunwa ukuze ukwazi ukubhala ngobuningi. Abantu abaningi, ikakhulukazi abafundi nabafundi, bafune amaphepha okucwaninga kanye nokuthunyelwe okunjalo. Kukhona okunye okumele kuthuthukiswe, futhi ungasungula imibono eminingi ukuheha abantu.
I-e-ncwadi iyindlela enhle kakhulu yokuheha izivakashi zakho ngokuqukethwe kombhalo. Ingenye yamathuluzi wakho wokuqukethwe okunamandla kunamanje. Ungalayisha amafayela e-PDF noma amawebhusayithi kusayithi lakho, futhi unikeze abasebenzisi bakho okuqukethwe okulandwayo.
Kufanele uqhube nemibuzo bese uyithumela kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Izingxoxo zingaba zezombangazwe, izidumi, futhi kufanele zifike ngendlela yezinto ezibhaliwe, imisindo namavidiyo. Lezi kufanele zibonakale wonke umuntu futhi kufanele zinikeze abantu ngolwazi oluningi.